Ogaden News Agency (ONA) – Midawga Yurub & Turkiga oo Kawada Hadlay Arimaha Qaxootiga.
Midawga Yurub & Turkiga oo Kawada Hadlay Arimaha Qaxootiga.
Posted by ONA Admin	/ March 19, 2016
Madaxda Midowga Yurub ayaa la kulmaya Ra’iisul wasaaraha wadanka Turkiga, waxay isku dayayaan inay dhamaystiraan heshiis, looga golleeyahay in lagu soo afjaro dhibaatooyinka muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub.
Turkiga ayaa la siinayaa gargaar dhaqaale iyo sidoo kale in loo fuliyo dalabkooda, taa badalkeeda waxaa laga doonayaa Turkiga, in uu dib dalkiisa uga celiyo muhaajiriinta dalka Giriiga ku sugan ee ka soo galay Turkiga.
Laakiin hoggaamiyayaasha Midowga Yurub oo kulmay khamiistii, ayaan jecleysan dalabka Turkiga. Ra’iisul wasaaraha Turkiga, Ahmet Davutoglu, ayaa sheegay in uu filayo mowqif mideysan, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in uu doonayo in xaaladan uu u wajaho gargaar bani’aadanimo.